नेयमारसँग विश्व कपका ३ प्रश्न | Hamro Khelkud
नेयमारसँग विश्व कपका ३ प्रश्न
साउ पाउलो (एजेन्सी)– विश्व कप फुटबल नजिकिदै गर्दा उत्साह पनि बढ्दो छ । ब्राजिलका फवार्ड नेयमार अवश्य पनि प्रतियोगिताका आकर्षण को बिन्दु रहनेछन् । उनै नेयमारसँग विश्वकपको सन्दर्भमा रेड बुलले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सन् २०१४ विश्व कपमा ४ गोल गरेका नेयमार र अहिलेको नेयमारमा के भिन्नता छ ?
– धेरै भिन्नता भएपनि वर्णन गर्न भने सहज छैन । मुख्यतः म मा अनुभव बढेको छ , त्यो नै सबै भन्दा ठूलो फरक हो । मैले खेलेको विश्वकपमा हामी हार्र्यौ , त्यसैले पनि अबको विश्व कपमा थप तयारीका साथ आउनेछौं । त्यसैले २०१८ को नेयमारमा २०१४ को नेयमार भन्दा धेरै सुधार देख्नु हुनेछ ।
२. रुस विश्वकपमा कुन राष्ट्रको सम्भावना छ र कुन राष्ट्र आश्चर्य चकित पार्न सक्छ ?
– मेरो विचारमा ब्राजिल , जर्मनी , फ्रान्स , अर्जेन्टिना र स्पेन नै बलियो टोली हुन् । सबै प्रतियोगितामा यीनै टोलीले बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दछन् । त्यस्तै बेल्जियमको टोली निकै राम्रो छ , त्यसैले बेल्जियमले सबैलाई चकित पार्ने सम्भावना छ । त्यस्तै लिभरपुलका फरवार्ड मोहोमद सलाहले इजिप्टबाट राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
३. ब्राजिलको समूहको बारेमा के भन्नुहुन्छ ? कुन टोलीसँग खेल्न गाह्रो होला ?
– विश्व कपमा सहज टोली भन्ने हुँदैन । त्यसैले मेरो विचारमा सबै टोलीसँग खेल्दा प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । त्यसैले यो प्रतियोगितालाई विश्व कप भनिएको हो । यहाँ विश्वका उत्कृष्ट टोली खेल्छन , त्यसैले सबै खेल महत्वपूर्ण छ ।
ब्राजिलले विश्व कप अन्तर्गत जुन १७ मा स्विट्जरल्यान्डसँग सामना गर्दै प्रतियोगितामा सुरुआत गर्नेछ । यी दुई बाहेक कोस्टा रिका र सर्बिया समूह इ मा छन् ।